Laba siyaabood oo wax badan looga helo NFC-ga Androidkaaga Androidsis
Eder Ferreño | | Codsiyada Android, Khiyaamada Android, Tababarada
NFC waa tikniyoolajiyad horumar ballaaran ka sameyneysa suuqa. Inta badan telefoonada dhamaadka-sare ee ku jira Android waxay horeyba u noqotay wax ka mid ah kuwa ugu caansan. Si tartiib tartiib ahna waxay u sameyneysaa gelitaankeeda noocyo kale oo telefoonno ah oo suuqa ku jira. Adeegsiga ugu weyn ee tikniyoolajiyaddan ayaa ah inaad awood u leedahay inaad lacag ku bixiso taleefankaaga gacanta si aad u fudud.
Nidaamka lacag-bixinta ayaa si weyn loo dedejiyey iyadoo la adeegsanayo NFC, maaddaama aan si fudud u haysanno inaan taleefanka u keenno meel u dhow qaybta lacag-bixinta ee dukaan oo sidan ayaa lacagta lagu bixiyaa. Aad u raaxo badan oo caan ku ah macaamiisha.
In kasta oo xaqiiqadu tahay taas NFC ee ku jira taleefanka Android wuxuu na siinayaa adeegsiyo badan oo badan, in laga yaabo inay jiraan isticmaaleyaal aan aqoon. Sidaa darteed, hoosta waxaan ku siinaynaa qaar ka mid ah adeegsiga laga samayn karo tiknoolajiyadan, si aad wax badan uga hesho adoo adeegsanaya qalabkaaga.
1 La wadaag faylasha ama codsiyada
2 La wadaag shabakad WiFi ah
2.1 Sida loo duubo sumadda NFC
La wadaag faylasha ama codsiyada
Tiknoolajiyad isku mid ah oo aan ugu isticmaalno inaan lacag ku bixinno taleefanka, waxaan u isticmaali karnaa inaan waxyaabo kale ku dirno. Thanks to NFC ee taleefankaaga Android qof kale ayaad u diri kartaa faylal ama codsiyo qaab aad u fudud. In kasta oo ay muhiim tahay, loona baahan yahay, in qofka kale uu sidoo kale teknolojiyaddan ku haysto taleefankooda. Hadii kale macquul maahan inay shaqeyso.
Xaqiiqdu waxay tahay in howshu runtii fudud tahay. Haddii aan rabno inaan u dirno codsi aan ugu dirno qof kale, waa inaan doorannaa dalabka la yiri, annagoo ku hayna. Soo socda, Waxaan ku dhejinaa mobilada barta ay ku taal anteenada NFC Qalabka. Adoo riixaya oo haya codsigii la yidhi, faylkiisa Google Play ayaa loo diri doonaa xidhiidhkan kale. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad si toos ah ugu soo dejiso taleefankaaga.
Waxaan ku celin karnaa isla nidaamkan waxyaabo badan oo dheeri ah. Maadaama aan cid kale u diri karno sawirro, dukumiintiyo, fiidiyowyo ama maqal ah qaab aad u fudud adoo adeegsanaya teknolojiyaddan. Nidaamka la fulinayo waa isku mid, marka hore xulashada feylka ama feylasha aan rabno inaan u dirno isticmaalehan kale. Ka dibna waxaan soo dhoweyneynaa taleefannada. Ilbiriqsiyo gudahood feylashan ayaa la soo diri doonaa.
La wadaag shabakad WiFi ah
Haddii dadku si joogto ah u yimaadaan gurigaaga oo isticmaali doona WiFi, waxay u badan tahay in mid ka mid ah su'aalaha ugu caansan ay tahay maxay tahay lambarka sirta ah ee shabakaddaasi. Haddii aad rabto in dadka oo dhami ay yeeshaan shabakad noocaas ah, iyaga username iyo password Qaab fudud, waxaad ku isticmaali kartaa NFC ee taleefankaaga. Sidaa darteed, hawshu aad bay uga fududdahay.
Waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah Abuur sumad NFC oo shabakadda WiFi ah, taas oo lagu muujinayo xogta isku mid ah. Sidan oo kale, waad kula wadaagi kartaa dadka guriga ku sugan wakhtigaas, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa jawiga shaqada, iyada oo shabakad kasta oo WiFi ah ay suurtagal tahay in sidan la sameeyo.
Marka markay dadkani halkaas joogaan, iyaga uun baa ku qasban dhig mobiladooda dushaada halka ay calaamaddu ku taal wayna awoodi doonaan inay ku xirmaan si toos ah shabakadda loo sheegay. Hab aad u fudud oo waqti ku badbaadin kara inaad la wadaagto magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah ee shabakadda qof walba.
Sida loo duubo sumadda NFC
Waa shaki in badankood soo bixi doonaan. Runtu waxay tahay inaysan ahayn hawl isku dhafan, in kastoo waxaan u baahanahay inaan u isticmaalno arji tan. Dukaanka Play waxaa jira codsiyo aad u yar oo noocan ah, laakiin waxaa jira mid si aad u fiican u shaqeeya oo aan kugula talineyno, kaas oo lagu magacaabo NFC Tools.
Codsigan waxaan haynaa fursado badan, taas oo noo oggolaan doonta inaan wax badan ka helno tiknoolajiyadan taleefanka, si aan uga faa'iideysano sida ugu fiican. Codsiga waa bilaash waxaadna kala soo bixi kartaa hoos:
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Tabaha si aad uga hesho waxyaabo badan taleefankaaga NFC